Masuuliyiin ka tirsan Koonfur galbeed oo qarax lala eegtay | KEYDMEDIA ONLINE
Masuuliyiin ka tirsan Koonfur galbeed oo qarax lala eegtay
Waxaa ka dhashay qasaaro oo ilaa iyo hadda laga soo werinayo dhaawaca Taliyaha NISA ee degmada Buurhakaba, Xuseen Dhuubow iyo guddoomiye ku xigeenkii hore ee degmada Buurhakabo Nuurow Ibraahim.
BUURHAKABA, Soomaaliya- Qaraxa oo ahaa miinada dhulka la geliyo ayaa lala eegtay gaari ay saarnaayeen saraakiil ka tirsan maamulka dagmada Buurhakaba ee gobolka Bay.
Waxaa ka dhashay qasaaro oo ilaa iyo hadda laga soo werinayo dhaawaca Taliyaha NISA ee degmada Buurhakaba, Xuseen Dhuubow iyo guddoomiye ku xigeenkii hore ee degmada Buurhakabo Nuurow Ibraahim iyo sidoo kale qaar kamid ah askartii la socotay.
Qaraxa kaddib, waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan Booliska Koonfur galbeed, kuwaas oo durba ka bilaabay aagga mashaqadu ka dhacay inay baaritaan ka sameeyaan.
Weli wax war ah kama soo bixin masuuliyiinta maamulka Koonfur galbeed oo ku aadan inta ay la eg tahay qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxan lala eegtay Taliyaha NISA ee degmada Buurhakaba, Xuseen Dhuubow iyo guddoomiye ku xigeenkii hore ee degmada Buurhakabo Nuurow Ibraahim.
Weerarrada Al-shabaab ayaa ahaa kuwo isa soo taraayay dhawaanahan, shalay aheyd markii ay dhulka la simeen qeyb kamid ah dhismihii garoonka diyaaradaha dagmada Buulo-burde ee gobolka Hiiraan, kaasi oo lagu waday in xarigga laga jaro.